Poolisii Federaalaa: Itoophiyaatti daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa to'achuuf labsin qophaa'aa jira - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Addis Ababa Police
Goodayyaa suuraa Meeshaalee waraanaa seeraan alaa kanneen to'annoo jala oolan
Daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa yeroo dhiyoo as Itoophiyaa bakkoota gara garaatti mul'achaa jiru to'achuuf sadarkaa biyyaatti labsiin qophaa'aa akka jiru Komishiniin Poolisii Federaalaa beeksiseera.
Wiixata darbe Matarayeesiin sadiifi rasaasni hedduun karra Qirxii ykn Inxooxxoorraan gara Finfinnee seensifamaa osoo jiruu to'annaa jala ooluu poolisiin beeksisee ture.
''Daddabarsi meeshaa waraanaa bakka tokko tokkotti dabaleera, bakka kaanitti ammoo to'annoo jala jira. Meeshaaleen tokko tokko alaa qofa kan galan miti.
Biyya keessa kuusaaleen meeshaa waraanaa jiru. Rakkoo bakka gara garaa tureen qaamoleen adda addaa cabsanii saamicha akka raawwatan ragaaleen mul'isan jiru'' jechuun Komishiner Indashaaw Xaasoo himaniiru.
Kan biraa ammoo daangaa biyyattii qaxxaamuruun,Sudaan Kibbaa, garii Jibuutii fi Somaaliyaan akkasumas karaa biroo gara biyya keessaa galaa jira jedhan.
Meeshaaleen hedduun kan biyya Turkitti omishaman yoo ta'u, kara biraan kan Masiriitti omishamanillee jiraachuus himaniiru.
Rakkoo kana furuufis eeruu uummataan to'annoo jala oolchaa jiraachuu himaniiru. Dabalataan hojii sakatta'iinsa idileetiinis kanumatti jiraachuu himan.
Daddabarsi meeshaalee waraanaa seeraan alaa kun MM Abiy Ahimad aangootti erga dhufanii booda bifa jijjiirrachuufi galmi isaas jijjiirama biyyattii gufachiisuu akka ta'e Komiishinar Indashaawu ni himaniiru.
Meeshaan waraanaa 500 mana nama tokkootti argame
'METEC meeshaa waraanaa seeraan ala daldaluu hin oolle'
Jijjiirama dura daddabarsi meeshaalee waraanaa ture akka kana bal'ina kan hin qabneefi meeshaalee waraanaa namooti dhunfaa itti fayyadamaniifi rasaasawwan akka ture ragaaleen ni mul'isu jedhan Komishiner Indashaaw.
''Amma garuu meeshaalee waraanaa nama dhunfaa irraa gara kan gareetti ceheera. Fakkeenyaaf Matarayeesiin meshaa gareeti, boombiis namni dhunfaa badaa hin hidhatu. Jijjiiramni jira.
Kana eenyu kan raawwatu jennee gaaf ilaallu, humnoota biyya keessaafi kan alaa jijjiirama amma mootummaan itti jiru xureessuufi, galma barbaadame akka hin geenye fedhanidha.
Lammata irratti bakka tokko tokkotti akka kanaan meeshaa waraanaa daldaluun duroomuu namoonni barbaadan akka jiranis bira geenyeerra,'' jedhan.
Labsii waan kana to'achuuf gargaaru baasuu dabalatee daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa kana to'achuuf hojiin bal'aa hojjetamaa jiraachuus komiishinar Indashaawu BBCtti himaniiru.
'Al-shabaab irratti haleellaa raawwadhe'
Daddabarsa meeshaa waraanaa kana to'achuufis gama hundaan to'achuun nurra jira jedhanii isaan keessaa tokko seera baasuu akka tahes himaniiru.
''Walumaagalatti meeshaa waraanaan wal-qabatee labsiin bahe hin jiru. Labsiin kun sadarkaa biyyaatti qophaa'aa jira. Qophaa'ee yoo dhumu rakkoo hedduu ni fura jennee yaadna'' jedhan.
Hojii ittisaa cimsuufi hojii poolisii hawaasaa cimsuun duula daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa amma jiru irra anuufi sirreessuuf hojii guddaa hojjechaa akka jiranis himaniiru.
Daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan alaa kutaalee biyyaa fi daangaa irratti qofa osoo hin taane magaalaa Finfinnee fi naannoo isheettis yeroo garaagaraa to'atamaa tureera.
Mohaammad Adamoo maaliif OBN hoogganuu irraa kaafame?
Miseensonni Raayyaa ajjechaa misirroon shakkaman to’ataman
'Kanan ishee waliin jiraadhu na ajjeefti jedhee sodaadheeni'
Daawwannaa Dr Abiyii fi Lammaarratti ummanni Beegii maal jedha?
Weellisaan duraanii maaliif taaksii oofuu akka filate dubbata
Buhaariin warra sagalee hatan akeekkachiisan
Atileetii 'osoo hin karoorfatin' riikardii addunyaa cabse
Namichi xumura waraanaa ayyaneffachuuf dubartii ‘dhungate’ boqote
Namticha jireenya isaa buufata xiyyaaraa Boolee godhate